ေြဗာသံြကားနှင့် တရားနာ | ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား
at Friday, February 05, 2010 –6မှတ်ချက်ေလးေတွ
ေြဗာသံြကားနှင့် တရားနာ ။ ။ ဧကန်ဧက မသိမြမင်ဘဲ ေြဗာသံြကားရံုနှင့် တရားနာရန်ရှိသည်ဟု အထင်နှင့် ရမ်းဆေြပာဆိုသကဲ့သို့ ကိုယ်တိုင် မေတွ့မြမင်ရဘဲ အထင်နှင့်ရမ်းဆေြပာဆိုသည်။
“မင်းတို့လက်ထပ်ပွဲကလည်း မေသမချာနှင့် ေရေရရာရာ မရှိပါဘူး၊ ေြဗာသံြကားနှင့် တရားနာ ဆိုတာလို တို့ြဖင့် မြကိုက်ပါဘူး..”
ကျမ်းကိုး။ ။ ပညာအလင်း၊ ၂။ ၁။ ၇၈။
“ပုစွန်စားရင် ေသွးတက်မယ်၊ ငှက်ေပျာသီးစားရင် ခွျဲထတတ်သေတာ့ဟူေသာ ေြဗာသံြကားရရံုနှင့် တရားနာခဲ့ြကရင်းက ေသာကြကံုခဲ့ြကရေတာ့သည်...”
ကျမ်းကိုး။ ။ ေရှ့သို့၊ ၇၊ ၇။ ၂၀။
ေြဗာသံြကား တရားနာ ဆိုတာက ၀ါ၀ါြမင်တိုင်း ေရွှမထင်နဲ့ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့တူသလား။ ေြဖြကားေပးပါေနာ်။ ေကျးဇူးပါ
၀ါ၀ါြမင်တိုင်း ေရွှမထင်နဲ့၊ ၀ါ၀ါြမင်တိုင်း ေရွှထင်၊ ၀ါ၀ါြမင်တိုင်း ေရွှမဟုတ်၊ အဲ့ဒါေတွနဲ့ ေြဗာသံြကား တရားနာ နဲ့က တူပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ေနာက်တစ်ခုက ေလဖမ်း ဒန်းစီး နဲ့လည်း တူပါတယ်၊
I'm ipmressed! You've managed the almost impossible.
Wonderful explanation of facts aavilalbe here.